Mpanamboatra milina elektronika efa nomanina mialoha - Shina mpamokatra herinaratra elektronika efa misy mialoha mialoha
Mivarom-boarary andoavana fiantohana fehezanteny tokana (karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay arakaraka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Mamatsy herinaratra herinaratra tokana (lavitra) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarinay ary novokarin'ny orinasanay arakaraka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Mirefy herinaratra herinaratra tokana (lavitra + modul) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay araka ny fepetra ara-teknika amin'ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
Mirefy herinaratra herinaratra tokana (module karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarina sy novokarin'ny orinasanay arakaraka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.321-2008. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.
3phase angovo metaly (karatra IC) dia vokatra fandrefesana angovo vaovao novokarinay ary novokarin'ny orinasanay araka ny fanitsiana ara-teknika ny GB / T17215.301-2007, DL / T614-2007 ary DL / T645-2007. Ity vokatra ity dia mampiasa lalam-pifandraisana midadasika sy teknika SMT, miaraka amin'ireo fiasa toy ny fandrefesana angovo elektrika, fanodinana angon-drakitra, fanaraha-maso tena misy, ary fifaneraserana vaovao.